(+261) 34 37 898 07
(c) Le Trait d-Union SERVICE - 2017-2018
PUBLICITE en DEFILEMENT
CLIQUEZ a chaque IMAGE
Bannières rotatives du Le Trait d-Union SERVICE
Mba efa nanam-paniriana ny hahafantatra ny fananganana sy fikirakirana ireny Blog na Site web ireny ve ianao? Mety tsy dia nahaliana anao izany teo aloha e!!!!; fa anio kosa manasa anao aho hanaraka ity lahatsoratra ity hatramin'ny farany fa tsy sarotra ny manangana ireny no sady mahafinaritra ary mety afaka atao fanampin'ny fidiram-bola na argent de poche hoan'ny zatovo.
--------Amin'izao vaninandron'ny fanatontoloana izao dia miara-miaiky amiko angamba ianao fa ny zavatra rehetra dia efa hita ato amin'ny Internet avokoa, Varotra, Fianarana, Fialamboly, Ny Vaovao, sy ny maro tsy voatanisa. ireny rehetra ireny anefa dia tsy voatery ho orinasa goavana sy manana ny maha izy azy eo amin'ny sehatry ny Informatique sy ny mitovy amin'izany no manao azy fa misy Olona tsy dia nandalo fianarana firy fa nampiana-tena toa ahy izay manoratra ity lahatsoratra vakianao ity no mamolavola ireny. Mety ho fanalana hamohamo fotsiny ihany no anaovan'ny sasany ny azy toa ahy teo aloha; fa tena fitadiavana sy fivelomana kosa hoan'ny sasany. Tena maro no mivelona amin'ny fikirakirana blog, ary misy aza mpanefoefo mihitsy toa an'i Anthony Nevo izay tompon'ny Blog Vie de dingue ohatra. Koa tiako ny milaza fa androany dia afaka ny hilahatra amin'ireo olona toy izany ianao. Hanoro anao ASTUCES koa aho amin'ny fomba azahoana mivelona amin'ny blog na site web izay hajoronao.
Misy mpiara-miasa aminay manome fiofanana maimaim-poana amin'ny fananganana Blog amin'ny alalan'ny fitaovana manokana antsoina hoe Wordpress. Mialoha ny tena hirosoantsika amin'izay fiofanana maimaimpoana izay anefa, dia sitrako ny hanolotra anao fohifohy ireto zavatra tsara ho fantatra ireto.
a) Hebergement: raha adika tsotsotra dia hoe “Fampiantranoana”, izy io no fitaovana ilaina voalohany indrindra raha hanangana Blog na Site. Izy no hampiantrano ny Blog na ny site-nao ao amin'ny internet, maro izy ireo fa ity misy iray izay ampiasaiko amin’izao izay mbola tsy hitako ny lafi-ratsiny hatreto sady maimaim-poana ihany koa, izy no sangany amin'ireo Mpampiatrano maimaimpoana na Hebergeur gratuit. Koa raha liana ianao dia tsindrio fotsiny ity lien ity https://www.000webhost.com/ na ny Bannier ery ambany. Afaka miakatra ho mpanofa-trano koa anefa ianao ao amin-dry zareo, marihako fa tena mbola mora ihany koa ny hofatrano ao amin'io site io ary maro ny tombotsoa ho anao.
b) Nom de domaine: io no afahana mahita ny site na blog-nao ato amin'ny internet na ilay antsointsika hoe adresse ny site web zay manana endrika http://mon-blog.com, raha misafidy an'ilay hebergeur izay omeko anao etsy ambony io ianao dia homeny nom de domaine maimaimpoana http://mon-blog.000webhostapp.com; raha miakatra premium ianao izany hoe miala amin'ilay fipetrahana fotsiny ao amin-dry zareo ny site-nao fa mandoa hofatrano dia miova ihany koa io nom de domaine io ho lasa http://mon-blog.com na http://mon-blog.net sy izay mety ho tianao satria manana safidy maro ianao amin'izany nom de domaine izany.
d) Ny Trafic: Na dia tsara endrika toy inona, eny na tsara rafitra toy inona ny zafatra voalaza sy hita ao amin'ny site na blog-nao ka raha tsy misy mpitsidika izany dia zava-poana sy heri-po verimaina fotsiny ny anao. Ka mba afahanao mampahafantatra ny asa-tananao ary, dia misy site web hotanisaiko etsy ambany izay afahanao manao promotion na doka ny site-nao afahan'ny olona maro afaka hitsidika azy.
Izy ity ihany koa no tena anisany manandanja raha ilay Blog hatsanganao ikendrenao fifanakalozana iraisampirenena, raha ohatra moa ny Blog hataonao hifampizaranao zavatra miaraka amin'ireo namanao sy ny sakaiza akaiky anao fotsiny ihany dia tsy olana fa na amin'ny alalan'ny Facebook dia ampy ampahafantaranao ny Blog-nao fa raha amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay kosa dia mila zavatra hafa ianao toy ireto sosokevitra izay omeko anao ireto:
- Midira amin'ireo fifanakalozana bannier publicitaire (karazana banderôle publicitaire) ity misy iray, lien ihany izy ity fa ery ambany misy Bannier ihany koa
- Midira koa amin'ireo fifanakalozana lien toa ireto atolotro anao ireto:
Fanamarihana: Maimaimpoana avokoa ireo atolotra anao ireo.
Hiparitaka sy ho hitan'ireo Internaute maro izay miisa an-tampitrisany maro ny asan-tànanao amin'ireo fomba roa ireo. Betsaka izy ireo ka arakaraky ny fidiranao amin’izy ireny no hampitomba hatrany ny visibilité-n’ny Blog na ny site-nao.
*Astuce hahitana fidiram-bola amin'ny fananganana blog: Maro ireo fomba mety afahanao mahazo vola amin'ny alalan'ny blog na site web izay hajoronao io :
1) Ny dokam-barotra; maro ireo site izay manome tambiny hoan'ireo site na blog miara miasa aminy manaiky ny hametrahany dokam-barotra ao amin'ny blog-ny, misy iray ity : http://pubdirecte.com marina fa kely tokoa ny tambiny azo avy amin'ny site toy itony fa raha mandeha tsara ny Trafic izay anananao dia ho hitanao fa hahita tombony tokoa ianao.
2) Ny Affiliation ; izy ity indray dia misy karany roa:
a) Misy plateforme na site goavana manana activité commérciale mitady olona hi-abonnée ao aminy, ka arakaraky ny hamaroan'ny Olona abonnée ao aminy no ahitany tombony amin'ny zavatra izay ataony dia manao ity antsoina hoe Affiliation ity izy, hoan'ireo izay mambra abonnée ao aminy ka mitondra namana hafa hi-abonnée ao amin'ilay site dia omeny commission amin'ny fidiran'ilay Olona ao fotsiny na amin'ny activité mampiasa vola ataon'ilay olona ao.
b) Plateforme manana entana amidy, ka ny anjaranao dia mametraka ireo entana ao aminy ireo ao amin'ny site-nao na blog anao, ka raha misy mividy iny ao amin'ny site-nao ao dia misy commision ihany koa ho anao. Tena misy vola raha ity affiliation iray ity satria misy platefome manome commission any amin'ny 50% ka hatramin'ny 70% amin'ny vidin'ilay entana , raha ny tena marina dia ity affiliation ity no tena iveloman'ny Olona maro ato amin'ny Internet.
-------Ity farany no horesahantsika kokoa, misy karazany maro izy ireo ato amin'ny Internet , inoako fa mba efa naheno ihany izany atao hoe Amazon izany ianao; plateforme d'affiliation Amerikana izy io, misy koa Plateforme Aziatika antsoina hoe Alibaba. ireo Plateforme roa ireo dia entam-barotra physique toy ny kiraro, saky, akanjo ... no hitanao ao, Raha mahaliana anao ireo dia mba manaova fikarohana kely dia midira mambra ao fotsiny dia araho izay toromarika omeny, dia alao ny entana mifanaraka amin'ny Theme ny blog-nao.
--------Ny iray hafa indray kosa dia Plateforme izay ahitanao entam-barotra Virtuelle irony; toy ny Video, Pdf, Audio,... mety ho fiofanana io na astuce na torohevitra mahasoa, mety ho zavatra maro e!!! Raha mahaliana anao koa dia ity misy iray izay tena malaza indrinra amin'ireo plateforme d'affilition des produits virtuelles 1tpe.com
Raha tsy hilaza afatsy ireo astuces roa ireo ihany aho dia efa ampy hahitanao tombotsoa goavana ny fananao blog, marihako anefa fa tsy de izay dokam-barotra rehetra dia hataonao anaty blog avokoa fa izay mifanaraka amin'ny Thème na zavatra ataonao ao anaty blog na site web izay hajoronao. Tsy de tsara koa ny mametraka dokam-barotra be amina pejy iray fa manorisory ny mpitsidika ny blog-nao.
Tiako ny milaza aminao fa anisan'ireo asa tsara ny mitantana Blog na Site web. koa mirary fahombiazana ho anao tanteraka raha hiditra ho isan'ireo Webmasters maro ato amin'ny iternet ianao. Ary mikaroha zava-baovao hatrany mba hampitombo ny fahalalanao amin'izay sehatra izay.
Araka ny efa voalaza dia etsy ambany avy ireo bannier sy bouton image izay afaka tsindrianao fotsiny dia hahita ireo zay efa noresahana tetsy ambony ianao. Io amin'ny Bannier eo ambany io ihany koa no hidiranao amin'ilay Formation hananganana blog maimaimpoana.
Ny Webmaster ny site Benjamin
Fanabeazana sy zava-mahasoa hoan'ny tsirairay miainga avy eto Fianarantsoa
site-nay azonao tsidihina koa
Ianao no Mpitsidika faha